प्राकृतिक रुपमा नै अक्सिजन बढाउन के गर्ने ? « Sajilokhabar
काठमाडौँ, २१ वैशाख । श्वासप्रश्वास तथा छाती रोग विशेषज्ञ डा. रक्षा पाण्डेका अनुसार फोक्सोको सबभन्दा गह्रौं भाग हाम्रो पछिल्तिर हुन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लूएचओ)ले पनि अक्सिजन आपूर्तिका लागि घोप्टो परेर सुत्न सल्लाह दिएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।